Global Voices teny Malagasy » Fanadihadiana iray Miresaka Ny Fiainan’ireo Adolantsento efa Reny ao Bolgaria · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Febroary 2017 3:36 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Stojanovski Nandika (fr) i Gwenaëlle Lefeuvre, Candy
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Bolgaria, Fahasalamàna, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina
Sary an'ny fanadihadiana “Fa iza ireny reny ireny” nataon'i Irena Daskalova.
Ny Fikambanana Bolgara momba ny fandrindràna fiainam-pianakaviana (BFPA), fikambanana iray tsy miankina amin'ny fanjakana, mikarakara ny fahasalamàna sy ny fanabeazana, no namoaka tao amin'ny Youtube ny fanadihadiana iray nahazo fankasitrahana, nampitondrainy ny lohateny hoe “Fa iza ireny reny ireny “, momba ny fiainan'ireo vehivavy dimy izay efa niteraka zaza iray fony izy ireo mbola tsy ampy taona.
Sarimihetsika novokarina tamin'ny 2011 ary maharitra telopolo minitra, amin'ny fiteny bolgara arahana teny anglisy mandady ery ambany mba hahafahana mandòna olona bebe kokoa. Izany eo ihany, fa olana manerantany  ny fitondran'ireo adolantsento vohoka aloha loatra sy ny fampanambadiana ny ankizy.
Nambaran'ny  BFPA fa tamim-pitiavana tokoa no nanoloran'ireo mpanatontosa azy ireo ilay lahatsary fanadihadiana mba ho afaka apetraka ao amin'ny Youtube. Ity ny famariparitana :
Eo amin'ny dimy ambinifolo taona eo i G.. EFatra volana eo ho eo izao ny kibony… zanany faharoa no hoteraka eo. Vao efatra ambinifolo taona izy raha niteraka ny zanany lahy voalohany. Iray amin'ireo tovovavy dimy arivo eo ho eo i G. izay “mandeha manambady” isantaona ao Bolgaria, ary miteraka ny zanany eo anelanelan'ny faha-telo ambinifolo sy faha-valo ambinifolo taonany. Na inona na inona antony, “reny-zaza” daholo izy rehetra ireny, izay izy ireo ihany no mitaiza ny zanaka naterany. Mazàna, tsy omena fahafahana mihitsy ry zareo mba hisafidy izay fiainany ary tavela ao anaty faribolana vetavetan'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra, ny tsy fananana asa ary ny fahantràna. Ary dia mety hanohy hamokatra lasitra mitovy amin'izany ireo zanany sy ny zanaky ny zanany, noho ny tsy fahafantarany fa afaka manome azy ireo fahafahàna hafa ny fiainana. Fa iza ireny reny ireny?
Io fanadihadiana io dia nahazo loka nandritry ny fetibe fahadimin'ireo sarimihetsika fanadihadiana “Roma Life-Central European Documentary Festival” tamin'ny Martsa 2012, ary nalefan'n y Tahirimbolan'ny Firenena Mikambana ho an'ny mponina (UNFPA)  rehefa misy hetsika ataony.
Nanomboka teo ny mpamokatra azy, Irena Daskalova,  dia namokatra sarimihetsika marobe, ary ny BFPA  kosa manohy ireo hetsika fanabeazana momba ny fahasalamnana ara-pananahana sy ny zo amin'ny fiterahana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/02/20/95820/
 Fa iza ireny reny ireny: https://www.youtube.com/watch?v=6pKj5Z2Gz2Q
 olana manerantany: https://globalvoices.org/2015/04/28/nappies-in-adolescence-alarming-number-of-pregnant-teens-in-venezuela/
 famariparitana : https://ifefsofia.files.wordpress.com/2015/04/ifef_2015_catalogue.pdf
 Tahirimbolan'ny Firenena Mikambana ho an'ny mponina (UNFPA): http://www.unfpa.org/fr
 Irena Daskalova,: http://www.imdb.com/name/nm5403228/